Dagaalka Afghanistan oo dib u billowday kadib markii ay dhammaatay xabad-joojinta
Rabshadaha ayaa sii xoogeystay xilli militariga Mareykanka ay wadaan qorshaha ay dhammaan askartooda kaga saarayaan dalkaasi marka la gaaro bisha September, taasi oo soo afjareysa howlgalka milatari ee 20-ka sano ka socday Afghanistan.
Attaullah Afghan, oo ah madaxa golaha gobolka Helmand, ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP in “dagaalku bilaabmay goor hore oo maanta ah welina uu socdo.”
Waxa uu sheegay in dagaalyahanada Taliban ay weerareen baro kontorool oo ku yaalla duleedka magaalada Lashkar Gah ee caasimadda u ah gobolka Helmand, iyo degmooyin kale.
Afhayeen u hadlay ciidamada Afghanistan ee koonfurta ayaa xaqiijiyay in dagaalku dib u bilaawday, islamarkaana uu xafiiska gudoomiyaha gobolka Helmand sheegay in ilaa iyo hada la dilay 21 dagaalyahan oo ka tirsan Taliban.
Dhanka kale, kooxda Daacish ayaa sheegatay in ay fulisay weerarkii Jimcihii lagu beegsaday masaajid ku yaal duleedka caasimadda Afghanistan, kaasi oo ay ku dhinteen 12 qof oo cibaadeysanayay, sida ay warisay SITE Intelligence Group.
Qaraxa ayaa ka dhacay gudaha masaajid ku yaal degmada Shakar Darah ee gobolka Kabul xilligii salaadda Jimcaha, waxaana dadka dhintay ka mid ahaa imaamkii masjidka.